သိန်း (၁၅၀၀၀) ခရီးစဉ်ရဲ့ ခြေလှမ်းအစအဖြစ် အောက်တိုဘာလအစမှာ ထီဆုတစ်ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ သားညီ - Cele Connections
သိန်း (၁၅၀၀၀) ခရီးစဉ်ရဲ့ ခြေလှမ်းအစအဖြစ် အောက်တိုဘာလအစမှာ ထီဆုတစ်ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ သားညီ
သရုပ်ဆောင် သားညီကတော့ အစ်ကိုဖြစ်သူ ဒွေးနဲ့ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးခဲ့စဉ်ကလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သလို ဒွေးကွယ်လွန်သွားချိန်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့ နေရာတစ်နေရာမှာ အခိုင်အမာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သားညီက နောက်ပိုင်းမှာ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ်ပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးလာပြီး သူ့ရဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းတွေကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးမြှင့်လို့လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှာတော့ သားညီက သိန်း (၁၅၀၀၀) ခရီးစဉ်ရဲ့ ခြေလှမ်းအစအဖြစ် ထီဆုအသေးလေးတစ်ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းကို “မိုင်ထောင်ချီဝေးတဲ့ ခရီးတွေဟာလည်း ခြေတစ်လှမ်းကစတာပါပဲတဲ့ …စိန်သားညီရဲ့ သိန်း 15000 ခရီးကတော့ ဦးဇော် နဲ့ အန်တီညူး တို့ ထီဆိုင်က ငါးသောင်းဆုနဲ့ စတယ် …Thank you October !!!” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
သားညီကတော့ သူ့ရဲ့ အောက်တိုဘာလအစကို ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ စတင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေ (၅) သောင်းဆိုတဲ့ ပမာဏက သားညီအတွက် မပြောပလောက်ပေမယ့် သားညီကတော့ တော်တော်လေး ဝမ်းသာနေရှာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သိနျး (၁၅၀၀၀) ခရီးစဉျရဲ့ ခွလှေမျးအစအဖွဈ အောကျတိုဘာလအစမှာ ထီဆုတဈဆုကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပွီဆိုတဲ့ သားညီ
သရုပျဆောငျ သားညီကတော့ အဈကိုဖွဈသူ ဒှေးနဲ့ ရုပျရှငျဗီဒီယိုဇာတျကားတှေ ရိုကျကူးခဲ့စဉျကလညျး ပရိသတျအားပေးမှုကို ရရှိပိုငျဆိုငျခဲ့သလို ဒှေးကှယျလှနျသှားခြိနျမှာတော့ အောငျမွငျတဲ့ နရောတဈနရောမှာ အခိုငျအမာရပျတညျနိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ သားညီက နောကျပိုငျးမှာ ဒါရိုကျတာတဈယောကျအဖွဈပါ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ရိုကျကူးလာပွီး သူ့ရဲ့ အနုပညာအရညျအခငျြးတှကေို တဈနထေ့ကျတဈနတေို့းမွှငျ့လို့လာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ အောကျတိုဘာလ (၁) ရကျနမှေ့ာတော့ သားညီက သိနျး (၁၅၀၀၀) ခရီးစဉျရဲ့ ခွလှေမျးအစအဖွဈ ထီဆုအသေးလေးတဈဆုကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပွီဆိုတဲ့ အကွောငျးကို “မိုငျထောငျခြီဝေးတဲ့ ခရီးတှဟောလညျး ခွတေဈလှမျးကစတာပါပဲတဲ့ …စိနျသားညီရဲ့ သိနျး 15000 ခရီးကတော့ ဦးဇျော နဲ့ အနျတီညူး တို့ ထီဆိုငျက ငါးသောငျးဆုနဲ့ စတယျ …Thank you October !!!” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားထားပါတယျ။
သားညီကတော့ သူ့ရဲ့ အောကျတိုဘာလအစကို ကံကောငျးခွငျးတှနေဲ့ စတငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ငှေ (၅) သောငျးဆိုတဲ့ ပမာဏက သားညီအတှကျ မပွောပလောကျပမေယျ့ သားညီကတော့ တျောတျောလေး ဝမျးသာနရှောတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့မှာ အသက် (၄၂) နှစ်ပြည့်သွားခဲ့တဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ကြီး နိုင်းနိုင်း